Mmiri mmiri na -egbuke egbuke China na -arụ ọrụ Ime Anwansi nrapado Eyeliner Na Igbe Igbe Label nkeonwe na ndị na -emepụta ya | Weiti
Mmiri na -enwu enwu na -arụ ọrụ Ime Anya na -arapara Eyeliner na igbe akara onwe
1, 2 n'ime 1 mkpịsị mkpịsị mmiri na-eji ara onwe ya
2, Waterproof na ogologo oge
3, Anwansi anwansi anyị bụ maka nrapado lashes ụgha
4, Usoro ohuru na teknụzụ nrapado
Liquid Pen nke na-ejikọ onwe ya
Kalocils 2 n'ime 1 Eyeliner Liquid na-ejikọ onwe ya bụ usoro ọhụụ na teknụzụ nrapado, nrapado, nchekwa na ịdị nro, enweghị mmerụ ahụ n'anya gị, isi ọma, dị larịị na eke, mmiri na-enweghị mmiri na ọsụsọ, ọ bụ nhọrọ kacha mma maka gị. lashes, na -enye gị ahụmịhe dị ịtụnanya. Eyeliner anyị bụ gluu adịghị mma na eyeliner, njigide siri ike maka lashes, ị nwere ike jiri nku anya anwansi anyị mee nku anya kama iji gluu ma ọ bụ eyeliner magnetik.
Resuable ma dịkwa mfe itinye
Ọ dị mfe itinye lashes ihe dị ka sekọnd 30. Chekwaa oge gị ma mee ka usoro ahụ dị mfe. Ebe e wusiri ike na -eme ka ị pụọ na nchekasị na mmechuihu nke idobe nku anya. Nzọụkwụ 3 dị mfe iji tinye nku anya na nke dabara adaba maka ndị mbido! Ikwanye liner ahụ, wee sere eriri ahụ n'akụkụ curl line curl, n'ikpeazụ tinye lashes. Enwere ike iji ụtarị ụgha ọ bụla.
Kedu ka esi etinye eyeliner nrapado?
1. Ikwanye eyeliner ugboro 10-20 tupu ojiji.
2. Dọrọ eyeliner n'akụkụ ntọala nku anya gị.
3. Jikọta nku anya na tweezers gị.
4, Jiri nwayọ pịa nku anya na mpaghara anya wee gwụchaa.
Kedu ka nkuchi anya ntachi anya eyeliner si arụ ọrụ?
Ngwaahịa na -arụ ọrụ site na idobe ahịrị nrapado dị larịị na nke ziri ezi (na ụcha, ma ọ bụrụ na ị na -eji oji), nke na -adị mma mgbe sekọnd ole na ole gasịrị. A ga-etinye ụdị lashes ụgha ọ bụla n'elu ahịrị na-egosi ọnya, ebe ọ ga-anọ dị ka gluu (mana maka anyị bụ ndị a na-amakarị aka, na-enwe obere ọgbaghara na mkpịsị aka na-arapara).
Igbe Eyeliner nkeonwe nkeonwe
Anyị nwere igbe nkwakọ eyeliner dị iche iche, ikpe eyeliner, wdg na nnukwu ngwaahịa dị njikere. Kama, ọrụ akara onwe onye ahaziri dị maka anyị. Dị ka ọ na -adị, maka igbe ngwaahịa ma ọ bụ ikpe dị njikere, anyị na -akwado ibipụta UV 3d, ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị na nha nke igbe dị iche iche, enwere ike ịhazi ya. Ihe ị ga -eme bụ izitere anyị akara ngosi na agba ị chọrọ. Anyị ga -emere gị nkwakọ ntutu kacha mma.
Hazie Ugbu a
Nke gara aga: Nnukwu ọnụ ahịa dị ọnụ ala nkeonwe akara warara na -ere 25mm mink ntutu ntutu
Osote: OEM 2020 Hot Popular Eye Liner Waterproof Magic Liquid Eyeliner Adhesive Glue Pen
Label nkeonwe Eyeliner
Mmiri Eyeliner Na -arụ ọrụ
OEM Factory nnukwu nrapado 2 na 1 waterproof cus ...
Mgbatị ntutu anya, Ndị na -ere ntutu anya, egbugbere ọnụ, eyeliner, Anya anya, mink lashes,